Contextual Targeting: Mhinduro kune Brand-Yakachengeteka Ad Mamiriro Ezvinhu? | Martech Zone
Mazuva ano kuwedzera kunetsekana kwevamwe, pamwe chete nekuparara kwecokie, zvinoreva kuti vashambadziri vava kuda kuendesa mamwe makomisheni akasarudzika, mune chaiyo-nguva uye pachiyero. Zvinotonyanya kukosha, vanofanirwa kuratidza kunzwira tsitsi uye vopa mameseji avo munzvimbo dzakachengeteka. Apa ndipo panobva simba rekutarisa mamiriro.
Zvekurerekera kunongedzera inzira yekunangisa vateereri vanokodzera vachishandisa mazwi akakosha uye nemisoro yakatorwa kubva mune zvemukati zvakapotera kushambadzira, izvo hazvidi cookie kana chimwe chiziviso. Heano mamwe mabhenefiti akakosha ekutarisisa kwemamiriro ezvinhu, uye nei ichi chichifanira kuve-nacho kune chero musvinji wedhijitari mushambadzi kana mushambadzi.
Contextual Target Inopa Context Beyond Chinyorwa
Injini inoshanda inonongedza zviripo inokwanisa kugadzirisa ese emhando yezvinyorwa zviripo pane peji, kupa chokwadi che360-degree nhungamiro kune iyo peji revo semantic zvinoreva.
Yepamberi mamiriro ekutarisisa anoongorora zvinyorwa, odhiyo, vhidhiyo uye mifananidzo kugadzira zvimiro zvekutarisa zvinoenderana zvinoenderana nezvinodiwa nemushambadzi, kuti kushambadza kuonekwe munzvimbo yakakodzera uye yakakodzera. Saka semuenzaniso, chinyorwa chenhau nezveAustralia Open chingaratidza Serena Williams akapfeka rutsigiro rweshamwari yetiketi yeNike, uyezve shambadziro yeshangu dzemitambo inogona kuoneka mukati memamiriro akakodzera. Muchiitiko ichi, nharaunda inoenderana nechigadzirwa.
Zvimwe zvemberi mamiriro ekutarisa maturusi kunyange ane vhidhiyo ekuziva kugona, uko kwavanogona kuongorora furemu yega yega yemavhidhiyo zvemukati, kuona marogo kana zvigadzirwa, vanoziva mhando yakachengeteka mifananidzo, ine odhiyo zvinyorwa zvichizivisa zvese izvi, kupa yakanakira nharaunda yekushambadzira mukati nekukomberedza icho chidimbu. yevhidhiyo zvemukati. Izvi zvinosanganisira, zvakakosha, furemu yega yega mukati mevhidhiyo, uye kwete iro zita chete, thumbnail, uye ma tag. Rudzi irworwo rwekuongorora rwunoshandiswawo pane zvemodhiyo zvemukati nemifananidzo, kuona kuti saiti yacho yese yakachengeteka.
Zvishandiso zvekare zvinogona kungoongorora zvinyorwa zvevhidhiyo kana odhiyo, uye usanyatsoongorora mifananidzo, zvichireva kuti kushambadza kunogona kupedzisira kwave munzvimbo isina kukodzera. Semuenzaniso, zita revhidhiyo rinogona kunge risina mhosva uye richinzi 'rakachengeteka' nechishandiso chekare, senge 'Maitiro ekugadzira doro rakakura' kunyangwe zvirimo muvhidhiyo pachayo zvinogona kunge zvisina kukodzera zvakanyanya, senge vhidhiyo yevechidiki vari kuita doro - ikozvino kushambadzira kwechiratidzo munzvimbo iyoyo chinhu chisina mushambadzi anogona kuwana parizvino.
Mimwe mhinduro dzakavaka indasitiri-yekutanga yemusika musika iyo inogonesa sarudza tekinoroji vadyidzani kuvhara maalgorithms avo ehumwe seimwe yekuwedzera nongedzo, uye nekupa mabhenji ekudzivirira kubva kune ane rusaruro, zvisina kukodzera kana zvine chepfu zvemukati - izvo zvinogona kushandiswa kuona brand brand kuchengeteka uye kukodzera anotarisirwa nemazvo.
Contextual Targeting Inokurudzira Brand-Yakachengeteka Mamiriro ezvinhu
Zvishandiso izvi zvinobvumidza nzira dzakaomesesa kupfuura kuenzanirana kwemazwi akakosha, uye bvumidza vashambadzi kusarudza nharaunda dzavanoda kusanganisira, uye zvakakosha, idzo dzavanoda kusarudzira, senge zvirimo vachishandisa kutaura kweruvengo, hyper partisanship, hyper politicalism, rusaruraganda, huturu, stereotyping, nezvimwe. Semuenzaniso, mhinduro dzakadai se4D dzinoita kuti mhando dzezviratidzo zvemhando yepamusoro dzitorerwe kuburikidza nekubatanidzwa kwakasarudzika nevanobatsirana navo seFactmata, uye mamwe maratidziro emamiriro ezvinhu anogona kuwedzerwa kusimudzira kuchengetedzwa kwenzvimbo yekushambadza.
Chirevo cheChinongedzo Chinonyanya Kubudirira Kupfuura Kushandisa Chechitatu-Party Cookies
Contextual kunongedza kwave kuchiratidzwa kuve kunoshanda kupfuura kunongedza uchishandisa wechitatu bato makuki. Muchokwadi, zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kutarisana nemamiriro ezvinhu kunogona kuwedzera chinangwa chekutenga ne63%, zvichipesana nevateereri kana nhanho yechinangwa.
Zvidzidzo zvakafanana zvakawanikwa 73% yevatengi unzwe maratidziro ane chekuita nemamiriro ezvinhu akawedzera zvirimo kana ruzivo rwevhidhiyo. Uyezve, vatengi vakanangwa padanho remamiriro ezvinhu vaive 83% vangangodaro vanokurudzira chigadzirwa mushambadziro, pane icho chakanangwa nevateereri kana nhanho yechiteshi.
Pakazara mhando kutsigira kwaive 40% yakakwirira yevatengi yakanangwa padanho remamiriro, uye vatengi vakashambadzira mameseji eshambadziro vakashumwa kuti vaizobhadhara yakawanda yechiratidzo. Chekupedzisira, kushambadza kwakanangana zvakanyanya nemamiriro ezvinhu kwakaburitsa 43% zvimwe zvekubatana kweveural.
Contextual Targeting Kukwana Chirongwa
Zvekunyanya kunetsekana kune avo vanoshushikana nekurasikirwa nekuki izvo izvi zvinogona kureva kuronga. Nekudaro, kunongedza kwemamiriro ezvinhu kunobatsira kuronga, kusvika padanho rinopfuura kushanda kwekuki. Idzi inhau dzakanaka kuvashambadziri, tichifunga mushumo uchangoburwa wakawana programmatic retargeting ichivimba nemakuki akawedzeredzwa kushambadzira kusvika ne89%, yakaderedzwa frequency ne47%, uye understate kutendeuka kwekuratidzwa uye vhidhiyo ne41%.
Nekudaro, kunongedzera kwemamiriro ezvinhu kunoshanda zvirinani nehurongwa nekuti inogona kupihwa mune chaiyo-nguva, pachiyero, munzvimbo dzakakodzera (uye dzakachengeteka), pane chirongwa chakasimudzirwa nekuki yechitatu-bato inogona. Muchokwadi, yaive ichangobva kutaurwa mamiriro ari akanyatsoenderana nechirongwa kupfuura chero imwe mhando yekunangisa.
Mapuratifomu matsva anopawo kugona kunyorera data-rebato rekutanga kubva kuDMP, CDP, maseva ekushambadzira, uye zvimwe zviwanikwa, izvo zvakambodyiswa kuburikidza neinjiniya yehungwaru, zvinoburitsa zvimiro zvemamiriro ezvinhu zvinogona kushandiswa mukushambadzira kwepurogiramu.
Zvese izvi zvinoreva kusangana kwekunongedzera mamiriro uye yekutanga-bato dhata inopa mabrandi mukana wekugadzira hukama hwepedyo nevatengi vavo nekubatana nezviri mukati izvo zvinovaita.
Contextual Targeting Inosvinura Rutsva Nyowani Hwenjere Kune Vatengesi
Chizvarwa chinotevera chezvishandiso zvine hungwaru zvine mamiriro zvinogona kuvhura mikana ine simba kune vashambadziri kuti vawedzere kushandisa maitiro evatengi uye kusimbisa kuronga midhiya nekutsvaga, zvese nekupa iyo nzwisiso yakadzama yezvinhu zvinoitika uye zvakakodzera.
Kunongedzera zvinoenderana hakungowedzere chinangwa chekutenga, zvinoitisawo nemari shoma, zvichiita kuti mutengo wecokokie pakutendeuka kushome zvakanyanya - kubudirira kwakakosha mune ino mamiriro ezvehupfumi.
Uye isu tinotanga kuona mamwe mamiriro ekutarisisa maturusi ekuwedzera data-yekutanga bato kubva kune chero inotsigirwa DMP, CDP, kana Ad Server, isu tinogona ikozvino kutanga kuona kuti izvi zvingashandurwe sei kuva mamiriro ehungwaru kune simba rinogoneka omnichannel mamiriro, kuchengetedza nguva-varombo vashambadzi nevashambadziri yakawanda nguva uye nesimba nekugadzira uye kutumira mamiriro akakwana zvese kamwechete. Izvi zvinobva zvasimbisa kuburitswa kwemashoko akakwana munzvimbo yakachengetedzeka yechiratidzo pane kuratidzwa, vhidhiyo, yemuno, odhiyo uye inogadziriswa TV.
Contextual kushambadzira uchishandisa AI kunoita kuti hodhi iwedzere kutaurika, iwedzere kukosha uye inopa kukosha kwakanyanya kune vatengi, zvichienzaniswa neshambadziro yakanangwa padanho rehunhu uchishandisa yechitatu-bato makuki. Zvakakosha, zvinobatsira mabhenji, vamiririri, vaparidzi uye mapuratifomu ekushambadza kukona kona nyowani munguva yepashure-kuki, kuve nechokwadi kuti kushambadza kunoenderana nezvakanangana nezvakanangana nemamiriro ezvinhu munzira dzese, nyore uye nekukurumidza.
Tsvaga zvimwe nezve kutarisana kwemamiriro ezvinhu pano:
Dhawunirodha Yedu Yekuchengetera Pane Yakaenderana Targeting
Tags: ad serverinogadziriswa tvbrand-yakachengeteka adscdpchinyorwacontextual advertisingkushambadzira kwemamirirokutarisisa mamirirohyper partisanshiphyper politicsmisinformationzvematongerwo enyikazvinetso zvepachenaprogrammaticrusaruragandachechitatu-bato makukitoxicity